Product Description Description: Plastic Rapid prototyping Dimension: 600 * 300 * 200mm ndidi: +/- 0,05 mm Mkpa ọgwụgwọ: Hand polishing agba: na-acha ọcha ma ọ bụ omenala Ngwa: Industrial Product Ntak-ahọrọ anyị? Anyị na-enye onye-nkwụsị ngwọta ngwangwa prototyping ọrụ! Youde nwere merela agadi ngwa prototype nhazi mmepụta e. Anyị nwere ike n'ichepụta ike, CNC machining emmepe, ...
Brand aha: Youde
Mbupu Port: Shenzheng ma ọ bụ HongHong
Ebute Time: 5 ~ ụbọchị 12
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: 50% ego na PO, 50% n'ihu nnyefe
Description: Plastic Rapid prototyping Dimension: 600 * 300 * 200mm
ndidi: +/- 0,05 mm Mkpa ọgwụgwọ: Hand polishing
Agba: na-acha ọcha ma ọ bụ omenala Ngwa: Industrial Product
Anyị na-enye onye-nkwụsị ngwọta ngwangwa prototyping ọrụ!
Youde nwere merela agadi ngwa prototype nhazi mmepụta e. We have powerful manufacturing capability, CNC machining centers, 3D Printing, plus auxiliary equipment like milling machine, Sand Blasting Machine, drilling machine etc and the cooperation of our partners, we are able to support every different components of the prototyping
More karịa 11 afọ trading na n'ichepụta ahụmahụ.
Obere iji bụ dị
Elu mma price Good ọrụ.
Nnyefe na oge.
Arụsi ọrụ ike na anyị QC otu ọrụ na-ekwe nkwa na anụ mma.
Ike. nwetara n'inye mmepụta maka Omenala imewe na OEM iji.
1. Omenala CNC machining Service: Hazie machining iche iche nke metal akụkụ na plastic akụkụ dị ka gị ịbịaru ma ọ bụ pictureOmenala
2. Omenala 3D Printing ọrụ: anyị nwere ike n'ichepụta ngwa ngwa na SLA na SLS dị ka gị ngwaahịa chọrọ.
3. Omenala Silicone akpụzi agụụ Nkedo: Anyị na-enye ndị nta iji ikpe na-agba ọsọ ọrụ gị site na silicone ebu agụụ nkedo.
4. prototype Kpọọ: Welcome ka prototype
ANYỊ Otito PROTOTYPING ikike
CNC machining, 3D ebi akwụkwọ (SLA), Silicon ebu mgbatị, laser ọnwụ, ekwe etc
ihe E Nwere
ABS, PC, eyi, PMMA, Pee, POM, PA, Rubber, Silicone, wdg
Aluminom ma ọ bụ ọzọ na ihe onwunwe: Brass, ọla kọpa, Ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara.
Size: 2000 * 1200 * 1000mm ma ọ bụ ahaziri
Prototyping feature (udi)
Ahaziri, anyị nwere ike machining mgbagwoju feature
Agba, Polish, silk-ebipụta, anodize, uzo elu, translucent elu, ahịhịa, roba mmanụ, electroplate.
Dị faịlụ formats
YOUDE prototype bụ rara ka ngwangwa prototyping isua 11, anyị nwere ọgaranya ahụmahụ ngwangwa prototyping ọrụ, anyị nwere ike inye ndị kwesịrị ekwesị ngwọta na CNC machining, 3D obibi, Silicone akpụzi agụụ Nkedo, Rapid tooling dị ka gị ịbịaru na chọrọ, and make your idea be prototype in few days, it can save the cost and time for you.
Anyị ga-akpachara anya na-enye anyị mbukota aro ma ọ bụ mbukota dị ka gị chọrọ.
Anyị nwere ike ime ndokwa ka nānaputa site DHL / FedEx / gbasie etc ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
Welcome ịkpọtụrụ anyị, anyị ga na-agbalị kasị mma anyị izute gị chọrọ!
Send gị ase Nkọwa na N'okpuru ebe a, Pịa "Send" Ugbu a!
Previous: Plastic Fast Prototyping Service
Osote: High Polish n'elu aluminum prototyping
obere ego CNC Rapid Prototyping
Omenala 3D Printing Plastic Product prototype
Omenala Plastic CNC machining
Elu àgwà plastic ngwangwa prototyping
CNC machining Plastic prototype maka Remote Control